Tiza kubva kuTarkov: mutambo wevhidhiyo unosvika kune yayo Alpha | Linux Vakapindwa muropa
Tiza kubva kuTarkov ndiro rinotevera zita raunofanira kunongedzera kune runyorwa rwemazita eLinux. Iyo shooter-mhando vhidhiyo mutambo unobva pane yehondo nharaunda iwe yauchazonyatsoda. Ichokwadi ndechekuti vagadziri vayo vanofara kuzivisa kuti Alpha yatove muchikamu chekusimudzira, ichiri kumberi zvishoma asi ichienda kumberi kuti isvike kuBeta munguva pfupi uye pakupedzisira isiye zvachose kuti ifadze vese vatambi.
Tiza kubva kuTarkov Ikozvino yave kutamba uye zvimwe zvakaburitswa zvaburitswa sikirini kuti uone kufambira mberi kuri kuitwa nevagadziri vayo uye panguva imwechete vanoisa mazino marefu kuitira kuti vashandisi vazhinji vave nechishuwo chikuru chekuti zita iri rova ​​mumigwagwa. Pasina mubvunzo kana iwe uchida iyi mhando yemavhidhiyo mutambo, zvirokwazvo Tiza kubva kuTarkov achakunzwisisa iwe kwemaawa akanamirwa kuchiratidziro uye uchinakidzwa nekubata uyu munhu uye zvese zvombo zviripo.
Kutiza kubva kuTarkov kunotsvaga modhi gadzirisa zvombo zviripo kuti iwe unogona kuwana mune mamwe mavhidhiyo ekuratidzira aripo pamambure uye kuti ivo vanogadzira vakaburitsa kuratidza mamiriro ekukura kwemusoro. Kunyangwe ivo vasati vazivisa zuva rekuburitsa, asi zvave kutozivikanwa kuti ichave ichiwanikwa kune mapuratifomu akadai seGNU / Linux, Apple's Mac OS X uye Microsoft Windows, ese iwo aine akarongwa kuburitsa imwe nguva pamberi pekupera kwegore rino 2016 .
Kuti udzidze zvakawanda nezvemutambo, unogona kuona vhidhiyo yandinobatanidza pano pamitsara iyi kwaunogona kuona turera nezve izvo zvakamirira iwe kana iwe pakupedzisira ukashinga kuzviwana. Pamusoro pazvose, nzira iyo inobvumidza kuchinjisa zvombo kuti uwane mhedzisiro dzakasiyana inonyanya kufadza sezvaungaona muvhidhiyo ... Kana zviri zvegrafiki, zvinotaridzikawo zvakanaka, kunyangwe ndichivaona vane rima, ndinovimba vanovandudza yekumisikidzwa kwekupedzisira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » Tiza kubva kuTarkov: mutambo wevhidhiyo unosvika kune yake Alfa
Kutaura chokwadi kushamisika kwemusoro wenyaya, hazvisi izvo zvatakambojaira kutamba muLinux uye ndinofara kwazvo kuti inokwanisa kuve yechokwadi.